ဇန္နဝါရီလ 11, 2018
IDM အပြည့်အဝ Crack 2018, IDM Patch 2018, IDM Serial Key ကို 2018, အင်တာနက်ကို Manager ကိုအပြည့်အဝ Download 2018
IDM အက်ကွဲ Download သင်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု Internet Download Manager အပြည့်အဝဗားရှင်း မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ IDM အက်ကွဲ တို့ကတဦးတည်းကလစ်အပေါင်းတို့၌ပရီမီယံ features တွေသော့ဖွင့် အဆိုပါ IDM များအတွက်အက်ကွဲဖိုင်တွေထုတ်လုပ် အလကား. Internet Download Manager (IDM) နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည် 2005 နေ့ကတည်းကပထမဦးဆုံး, ကုမ္ပဏီက PC ကိုအသုံးပြုသူများအဘို့နှင့်အထူးသဖြင့် Windows အအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးသောဤဒေါင်းလုတ်ဆွဲဆော့ဖ်ဝဲကို၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာနေသည်.
Internet Download Manager အပြည့်အဝဗားရှင်း crack 6.29
IDM 6.230 အပြည့်အဝဗားရှင်း crack
IDM patch ကို 6.29
ဒေါင်းလုပ် IDM အခမဲ့ download crack
IDM ဒါကိုတော့ 6.29 တည်ဆောက် 7
သာ IDM patch ကို 6.29
IDM အက်ကွဲ 6.30
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုတည်ဆောက် 17 ရိုက်သံ
မကြာသေးမီက IDM ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဒီဗားရှင်း၏အမည်ဖြစ်၏ IDM developer များအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး 6.29 တည်ဆောက်2ဗားရှင်းအသစ်ကိုအင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ၏ပစ်လွှတ်ဗားရှင်းများအတွက် IDM အက်ကွဲနှင့်အတူ 6.29 တည်ဆောက်2လည်းရရှိနိုင်.
ဒါဟာသင်လုံးဝအခမဲ့ IDM ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုခံစားစေခြင်းနှင့်စာအုပ်များအပါအဝင်ဖိုင်တွေအမျိုးအစားအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဆော့ဖျဝဲ, ဂိမ်း, ရုပ်ရှင်တွေ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတဖိုင်တွေပိုမြန်အရင်ကထက်.
IDM အက်ကွဲအသစ်ကဘာလဲ 6.29 တည်ဆောက်2ဗားရှင်း?
ရဲ့ start မှာတော့ 2017, IDM ရဲ့အဖွဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများစွာကို bug တွေတိုးတက်လျက်ရှိသည်, Firefox ကို၏ဗားရှင်းအသစ်နှင့်ပတ်သက်သောခဲ့ပြီးသောအထူးသဖြင့်သူတို့အား. သူတို့ကလုနီးပါးအလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌သူတို့ IDM ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့ကြဘာဖြစ်လို့ရဲ့လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာတိုးတက်အောင်စောင့်ရှောက်.
အကယ်. သင်က ဒေါင်းလုပ် IDM အက်ကွဲ ထို့နောက်သင်အများကြီး IDM ၏အသင်းယခုနှစ်လစဉ်လတိုင်းအတွက်ဗားရှင်းအသစ်ဖြန့်ချိထားပါတယ်သင်တို့သိရ 2017 နှင့်ဤအဆင့်မြှင့်အများစု Firefox ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုရင်ဆိုင်နေရခဲ့ပြီးသော bug တွေဆက်စပ်ခဲ့သည်. ဗားရှင်း IN 6.29, သူတို့နောက်ထပ်မူရင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲမြန်နှုန်းဆုံးရှုံးမပါဘဲ VPN ကိုချိတ်ဆက်မှုများကိုနှင့်ပရောက်ဆီဆာဗာများမှတဆင့်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအပါအဝင် bug တွေ fixed ပါပြီ.
ဒေါင်းလုပ် IDM အက်ကွဲ၏ဗားရှင်းအသစ်လည်း Firefox ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအထောက်အပံ့နှင့်အရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်း Firefox နှင့် Google Chrome ကိုအတူပေါင်းစည်းတိုးတက်. နှင့် IDM အက်ကွဲ 6.29, သငျသညျယခုအိပ်ပျော်ခြင်း mode သို့သွားပါနှင့်သင့် PC ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုအချိန်ဇယားသတ်မှတ်နိုင်သည်. ပေမဲ့, သငျသညျလျှင်
IDM ရဲ့ Download လုပ်အင်ဂျင် options များနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်, ပြီးနောက်သင်ထွက်ရှိပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောတိုးတက်မှုများလွန်းလိမ့်မည်.
အဘယ်ကြောင့်ဒေါင်းလုပ် IDM အက်ကွဲဗားရှင်း 6.29?
IDM အက်ကွဲကကမ်းလှမ်းသောဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းကအခြားသူများထက်သီးသန့် software ကိုအောင်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်၏စာရင်းထဲတွင် IDM လူကြိုက်များစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်အကြောင်းပြောဆိုတာကပိုရှိပါတယ်။
ရွေးချယ်မှုများဒေါင်းလုပ် one click: Internet Download Manager အလွန်လွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်တယ်. သင်ကဒေါင်းလုတ်ဆွဲရည်ရွယ်ချက်အခြားပြင်ပ software ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. အဆိုပါ IDM အက်ကွဲသင်သည်တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူမည်သည့်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြု.
မည်သည့် site မှဗီဒီယိုများဖမ်းပြီး: IDM ၏အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျ YouTube ကိုအပါအဝင်အခမဲ့ဗီဒီယိုများကို download လုပ်ပါကထို option ရှိသည်နှင့်အများကြီးမပိုပါဘူးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်သင့်ရွေးချယ်မှုဘယ် website မဆိုမှဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖမ်းပြီးသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်.
IDM အက်ကွဲဖိုင်များအားလုံးကိုထောကျပံ့: IDM အက်ကွဲမပို Flash နှင့် SWF စသည်တို့ကဲ့သို့အဝဘ် developer များကအသုံးပြုလျက်ရှိသောသူတို့အားအပါအဝင်ဖိုင်တွေအမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ခံပါတယ်ရာယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်.
အလျင်မြန်ဆုံးဒေါင်းလုတ်ဆွဲမြန်နှုန်း: အစောပိုင်းကပြောသည်အဖြစ်, IDM ကကမ်းလှမ်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲမြန်နှုန်းကိုအခြားအခမဲ့နှင့်ပရီမီယံ software ကိုထက်အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကိုသုံးပါလျှင်သင်ပင်မြန်နှုန်းဒေါင်းလုပ်၏တစ်ခုတည်း bit နဲ့အတူအဘယ်သူမျှမယဇျပူဇျောလုပျ.
VPN နဲ့ proxy ဖြင့်အလုပ်လုပ်: ကအသုံးပြုသူများအတွက်လုံခြုံစေရန်, ယခု IDM အက်ကွဲလည်းမရှိပဲ VPN ဆာဗာနှင့် https ကို proxy ကိုထောကျပံ့. သင်အသုံးပြုလုံးဝအခမဲ့နေသော IDM အက်ကွဲရဲ့အဆင့်မြင့် options များ၏အကူအညီဖြင့်အမည်မသိအသုံးပြုသူအဖြစ်မည်သည့်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်.
ကြိုတင်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ options များ: IDM ၏ကြိုတင်ဒေါင်းလုပ်ရွေးချယ်စရာသင်သည်သင်၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဖိုင်များကိုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု. သငျသညျကိုကြိုတင် IDM အက်ကွဲ options နဲ့ပရီမီယံ features တွေ၏အကူအညီဖြင့်အိပ်စက်ခြင်း mode ကိုသို့မဟုတ်သင့်ဖိုင်တွေမဘို့ရာခန့်အချိန်ဇယားသို့သွားနိုင်ပါတယ်.
IDM အက်ကွဲစေသည်ပေးသောအဓိကအကြောင်းပြချက်က၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်. မဆိုတစ်ခုတည်းပိုက်ဆံပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသုံးစွဲဖို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ cracker ဖိုင်များ၏အကူအညီဖြင့်, IDM အက်ကွဲသည်သင်၏အဘို့အက်ကွဲဖိုင်ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင် activation သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ဘို့ IDM နံပါတ်စဉ် generate ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး အခမဲ့ download IDM အက်ကွဲ သငျသညျအခမဲ့ IDM download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ version ကို.
download, IDM အက်ကွဲ
IDM အက်ကွဲဗားရှင်း Download 6.29